I-Clown ye-Face Painting Design
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Funda u Paint
Ubuso obulula obunzima buyinto elula kunye nokukhawuleza ukupenda kumntu ukuba unamathele kwizinto eziphambili, izinto eziphambili: impumlo, umlomo, amehlo, i-intanethi kunye nezihlathi. Ingaba uthayibhela ubuso bonke umbala wesiqalo-ngokuqhelekileyo umhlophe umgca-ngaphambi kokuba uqale ukudala iinkcukacha zobuso kwimigqa evelelekile kuwe kunye nexesha elingakanani. Ukuba wenza umzobo ojongene nesihlwele kwiqela okanye kwi-carnival, kuya kukunceda ukhawuleze "umgca wokuvelisa" ukuba uncedisi onokwenza umgcini wecala.
Iipalati Zobuso: Okufuneka Ukwazi
Ngezona ziphumo ezilungileyo, sebenzisa izimonyo zebhondi kunye neezongezo zombala eziye zavunyelwa yi-FDA, kwaye uqhagamshelane ne-chart ye-FDA ukuze ufumane imibala elungile ukuyisebenzisa eduze kwamehlo. Ungalokothi usebenzise iiprikisi ze-acrylic nangona zibizwa ngokuba zingekho zityhefu, njengoko zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kwesikhumba kwaye zingaba ne-formaldehyde. Nceda uqaphele ukuba kunye neepalini zobuso bebakala zingaba nexabiso elincinci lensimbi enzima, ngoko qi ni sekise ukuba abathengi bakho abanalo i-allergies kwisinyithi kwizinto zokugqoka ezifana ne-nickel.
Unokufumana kwakhona imibala ebomvu yobume kwimarike eyenziwe ngemibala esekelwe kwisityalo kunokuba izithako zamakhemikhali, nangona iintlobo ezahlukeneyo zemibala zingabi zizinzileyo njengezinye iindawo zokuthengisa. Okanye yenzele upende lobuso bakho kunye nombala wokutya okutyayo kunye ne-cornstarch exutywe kwi-moisturizer.
Izinto zokuQala kuqala
Cinga nge-clown kwaye ucinga ntoni kuqala? Iphunga eliqaqambileyo. Kodwa musa ukuzikhawulela ebomvu; Ukusebenzisa eminye imibala yeempumlo kuya kwenza ukuba ubuso obunjani bube bubukeka buhluke.
Hlanganisa iSmile Smile
Into yesibili ocinga ngayo ngamaclowns yinkxwabo enkulu, ebanzi. Yenza kube mkhulu kunomlomo oqobo, ungena phezulu nangaphantsi komlomo uze uphume emahlathini.
Ukutshintsha, utshintshe indlela incumo iphelela ngayo, umzekelo usebenzisa isangqa esingajikelezileyo (njengaye apha), i-curve encinci, okanye iqhosha elibukhali (okanye enye nganye).
Yongeza iinqununu eziPhambili
Yenza udweba iinki ezinombala oya kuvela, ukunyusa ubungakanani (ubude nobubanzi) kancane, ukuze benze okugqithiseleyo. Musa ukuzikhawulela ukulandela ijika eliqhelekileyo le-eye-makhonkco-yenza i-angle engqinileyo okanye amaqabini amabini ahluke.
Ipeyinti Eminye Amehlo Ayolo
Ngoku umbala kummandla phakathi kweenki ezipende kunye nendawo yamehlo. Ngokwahlukileyo, upende phantsi etaweni emacaleni kwamehlo, njengoko kuboniswe apha.
Kwakhona, ukuhluka kwimilo odwebayo apha kuya kubangela ukungafani phakathi kobuso obunemibala. Kwakhona ujonge ukufaka omnye umbala.
Ukwenza amehlo amaninzi amakhulu (ngokukodwa kunye nomxholo obalaseleyo) uyaziwa kwiindilinga ezinjenge-"raccoon" kwaye ithathwa njengobuso obukrakra, ngokukodwa xa kwenziwe ngemibala emnyama.
Akukho sizathu sokuba amehlo abe ngumbala ofanayo.
Buza umntu obhekane naye ukuba upende ukukhetha imibala yamehlo akhe.
Yongeza i-splash encane yombala, njengenkwenkwezi okanye enye imifanekiso kwisihlathi, kwaye ugqibe.
Udwebo kwiPhepha ngeA acrylic
Isikhokelo esisisiseko sokuPalela i-Sunset Landscape
Indlela yokudweba Umthi ongokoqobo
Ukuqonda Imiphi Imibala Eyayidinga Ukuqala Ukupenda Ngeoyile
Ndingakhetha njani imibala ngeendlela ezichanekileyo?
Ngaba uVinegar Ujika i-Acrylic Paint In Fabric Paint?
Ndiqala njani ukuPenda kwioyile?
Iinqwelo eziphambili zeGalofu kunye neeClapses
Yimangalisa! Ube Udwebe Iimitha Zomnqophiso Zonke Eli xesha
Ukutshintsha koMculo wobuKristu
Izifundo ezivela kwiQur'an ngokubhekiselele ekuhlekeleni nasekuhlaseleni
Usebenzisa njani i-Latin Intensive Pronoun 'Ipse' ('Self')?
EziNwele! Ubuso! Ubugcisa beNwele kunye noMyili weMveliso
Utshintshi - Iiplanethi ekuhambeni
Umtshato eKhana - Ingxelo yeBhayibhile yeBhayibhile
UkuHlola okuBathathu Ukuzivocavoca kwiSivumelwano seVesi
Ukuxhaswa Inkcazo kunye neMzekelo kwiKhemistry
Indlela yoRig yoMthintelo